CircuPress: Email maka WordPress bá »Finally N'ikpeazụ! | Martech Zone
CircuPress: Email maka WordPress bá »Finally N'ikpeazụ!
Monday, November 11, 2013 Tuesday, June 17, 2014 Douglas Karr
Ihe dị ka afọ atọ gara aga, mụ na Adam Small nọdụrụ n'ụlọ ahịa kọfị anyị kachasị amasị anyị ma ọ na-ekwupụta etu ndị na-enye ọrụ email siri ike ga-esonye. Arụrụ m ọrụ na ExactTarget dị ka onye na-ahụ maka njikọta ihe m maara nke ọma ihe ịma aka dị iche iche. Adam na nwunye ya tọrọ ntọala Mara ihe, a ezigbo ụlọ ahịa na-ere ahịa nke toro ma na-ezipụ ọtụtụ iri puku ozi ịntanetị kwa izu. Nsogbu bụ na ndị na-enye ọrụ email (ESP) na-adịkarị ka ọ na-ewuli atụmatụ njikọta ha na ịchọrọ ma ọ bụ dị ka ihe echebara echiche na njirimara onye ọrụ ha.
Anyị malitere igwu ala ma mee nyocha wee chọpụta na enwere ọtụtụ ndị na-eweta email dị ebe ahụ, ọbụlagodi Amazon amalitela otu, mana ọnụahịa na mgbagwoju anya enweghị isi. Dị ka ahịa email na-aghọ ihe kacha mkpa nke ndị ọrụ Adam nwere, ọ na-adịwanye ntụkwasị obi, na-emefu ego, ma na-enwekwu nkụda mmụọ. N’ihi ya, o kpebiri ịmalite nke ya! Ihe dị ka otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, usoro ikpo okwu Adam na-ezipụ site na MTA nke ya (Onye na-ede akwụkwọ ozi Mail). Adam wuru ngwangwa ngwanrọ nke ya wee pịa nsochi n’elu ya! Ya na nnyefe ya dịkwa ka nyiwe niile ọ rụburu ọrụ.
N'oge ahụ, anyị malitere ịtụgharị uche etu anyị ga-esi jiri akụrụngwa ndị ọ kwadebere maka ọhaneze. Na Martech ZoneỌganihu onye debanyere aha na-eto eto na ndị debanyere aha 100,000, anyị na-etinye obere ego na onye na-ere ahịa email anyị ma anyị enweghị obi ụtọ, ma. Anyị kwesịrị ijikwa usoro abụọ, otu maka ide ọdịnaya na otu maka ijikwa ndị debanyere aha na ọdịnaya. Kedu ihe kpatara na anyị agaghị enwe ike ịchụpụ ya niile WordPress?
Anyị nwere ike… na WordPress abịawo ogologo ụzọ n'afọ ndị ahụ. Igodo nke ohere bụ mgbakwunye nke ụdị post post. Omenala post ụdị nyeere anyị aka ịme ụdị a na-akpọ email na iji ndabara ọdịnaya management na templating usoro iwu email. Adam weghaara ya akụrụngwa nke enwere ike ịkachasị maka scalability, anyị wee rụọ ọrụ na ngwa mgbakwunye ahụ! Yabụ, onye ọrụ nwere ike iji ngwa mgbakwunye mepụta ma jikwaa ọdịnaya ahụ, yana CircuPress nwere ike ijikwa izipu, nyocha, njikwa ibiaghachi, njikwa ndenye aha na ọrụ ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na anyị abụọ nwere ọrụ ụbọchị, ngwa mgbakwunye were nsogbu. Adam rụrụ ọrụ na ya, arụrụ m ya, Stephen degharịrị ya, anyị nwalere, nwalee, nwalee ma nwalee ọzọ na ndị ọzọ. Anyị nyefere ngwa mgbakwunye na WordPress n'izu gara aga ma ha nyere ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ. Izu gara aga, Adam degharịrị ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke templa na anyị nyefere ọzọ na Fraịde. O teghị aka tupu anyị enweta ozi anyị chọrọ… WordPress kwadoro CircuPress. Anyị kwenyere na anyị bụ naanị ndị na-eweta ọrụ email wuru maka WordPress!
Anyị atụkwasịla ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche. Ihe mgbakwunye ahụ etinyegoro ụdị wijetị, mkpụmkpụ na ọrụ. Ihe mgbakwunye ahụ na-ebipụta ozi ịntanetị gị na-akpaghị aka na saịtị gị - yabụ ịntanetị gị ziri ezi na saịtị nke gị! Ozi ịntanetị kwa ụbọchị na kwa izu na-akpaghị aka ma na-aga mgbe ọ bụla ị nwere ọdịnaya ọhụrụ. Akụkụ dị mma n'ezie bụ na a na-edochi vidiyo agbakwunyere na nseta ihuenyo na igodo bọtịnụ ka ọkara nke ndị ahịa email na-anaghị egwu ihe oyiyi ka na-ekwe ka onye na-agụ pịa vidiyo ka ọ kpọọ. Ihe ndi ozo na-abia n’akuku maka nke ahu!
Ike gwụrụ gị na ndị na-ere ahịa email dị oke ọnụ ma chọọ iji mejupụta ọdịnaya gị n'ezie? Banye maka CircuPress taa! Anyị na-atụgharịrị ndị debanyere aha na blọọgụ a na CircuPress… kpachara anya ịdenye aha na ị ga-ahụ otu ha si dị mma.
Lelee Mgbasa Ozi Email gị
Zipu Email A Na-achọ
Hazie Akaụntụ Gị na Zigara Zigara Ha
Hazie Template gị
Hazie Koodu Ndebiri gị
Hụchalụ ndebiri gị
Tags: email maka wordpressemail ahịa wordpressala maka wordpressemail wordpresswordpress email ngwa mgbakwunyeakwụkwọ ozi wordpresswordpress Akwụkwọ Akụkọ pluginwordpress ụtụ magazin ngwa mgbakwunye
Postano gbasara Egwuregwu Social Media Command Center
Nov 14, 2013 na 10:43 AM
Hey Douglas, oke ozi! Daalụ, nke a dị ka atụmatụ dị egwu ma m ga-edebanye aha ma nwee anya.
Guillermo Ziegler kwuru
Dec 22, 2013 na 7:21 PM
Ekele m. It looks very, nnwale., Ma gá »‹ ga-eme m n'ezie AWeber isi? Enwere m ike ịkwaga ya na ikpo okwu gị?
N'agbanyeghị. N'ihu ihu nke CircuPress enwere ederede bos nke akpọrọ "A na-akpọ CircuPress Onye Ga-enwerịrị Azụmaahịa WordPress Ntanetị maka Email!" na ebe ahụ ọ na-ekwu "Akpọrọ aha WordPress na n'elu 6 nke ga-enwe WordPress plugins". Achọrọ m ịsị “Akpọrọla CircuPress…”
Jisie na oru gi!
Dec 22, 2013 na 8:26 PM
Daalụ @guillermoziegler: disqus! Dabere na otu ị si eji AWeber. Á »you're bá» If rá »If na á» ‹na-eji AWeber ka iziga gá» ‹kwa ubochi ma á» bá »weekly izu n'izu, mgbe ahá» you - i nwere ike mbubata gá »‹ debanyere aha (5,000 á »bá» each la email). Na ekele maka mgbazi ahụ - emelitere saịtị ahụ!
Dec 23, 2013 na 12:21 PM
Na ajụjụ ọzọ… Enwere m ike nweta nkwalite / downgrade m atụmatụ dị ka mkpa?
Dec 23, 2013 na 12:27 PM
Anyị na-arụ ọrụ na ịgba ụgwọ ugbu a - ee, ọ dị!